Filimka Phillauri Iyo Todobaadkiisa Kowaad Lacagaha Uu Gudaha Hindiya Kasoo Xareeyay from Filimside – by Zakarie Abdi Fri Mar 31 2017 14:10:29 (3 hours) # 10. Mar 31, 2017 - Waxaa Qoray: Zakarie Abdi Taariikh: March 31, 2017: Anushka Sharma iyo Diljit Dosanjh filimkooda Phillauri ayaa si rasmi ah loo soo daabacay todobaadka kowaad lacagaha uu gudaha Hindiya kasoo xareeyay. Sida shabakada Boxoffice India shaaca ka qaaday filimka Phillauri todobaadkiisa kowaad liito ayuu sameeyay oo ah 20.25 Crore (Trade Figure) wax sare u kac ah ma sameynin filimkaan maal maha shaqada wuxuuna ganacsigiisa ugu badan sameeyay sedexdiisa maalmood ee ugu horeesay. Waxaa ku adkaan doonto filimka Phillauri 30 Crore inuu gaaro cimri ahaantiisa si uu filim bad baaday (Average) u noqdo madaama hoos u dhaciisa joogto ahaa maal mihii ugu dambeeyay sidoo kalena todobaadkiisa labaad lama filan doono inuu ganacsigiisa noqdo mid saameyn leh. Fillimka Phillauri ganacsi dhex dhexaad ah ayuu East Punjab ka sameeyay asigoo todobaadkiisa kowaad ka keenay 5 Crore waana gobolka kaliya ee uu ku wanaagsan yahay sababtana waxay tahay in Super Star-ka reer Punjab Diljit Dosanjh filimkaan door muhiim ah ku leeyahay. Balse midaas wax micno ah ma sameyn doonto madaama ganacsigiisa guud Hindiya oo dhan liito waxaa muuqato Anushka Sharma filimkaan soo saaraha ay ka tahay noqon doono mid ganacsi ahaan guul dareesto. - Hablaha Media Network
Filimka Phillauri Iyo Todobaadkiisa Kowaad Lacagaha Uu Gudaha Hindiya Kasoo Xareeyay from Filimside – by Zakarie Abdi Fri Mar 31 2017 14:10:29 (3 hours) # 10. Mar 31, 2017 - Waxaa Qoray: Zakarie Abdi Taariikh: March 31, 2017: Anushka Sharma iyo Diljit Dosanjh filimkooda Phillauri ayaa si rasmi ah loo soo daabacay todobaadka kowaad lacagaha uu gudaha Hindiya kasoo xareeyay. Sida shabakada Boxoffice India shaaca ka qaaday filimka Phillauri todobaadkiisa kowaad liito ayuu sameeyay oo ah 20.25 Crore (Trade Figure) wax sare u kac ah ma sameynin filimkaan maal maha shaqada wuxuuna ganacsigiisa ugu badan sameeyay sedexdiisa maalmood ee ugu horeesay. Waxaa ku adkaan doonto filimka Phillauri 30 Crore inuu gaaro cimri ahaantiisa si uu filim bad baaday (Average) u noqdo madaama hoos u dhaciisa joogto ahaa maal mihii ugu dambeeyay sidoo kalena todobaadkiisa labaad lama filan doono inuu ganacsigiisa noqdo mid saameyn leh. Fillimka Phillauri ganacsi dhex dhexaad ah ayuu East Punjab ka sameeyay asigoo todobaadkiisa kowaad ka keenay 5 Crore waana gobolka kaliya ee uu ku wanaagsan yahay sababtana waxay tahay in Super Star-ka reer Punjab Diljit Dosanjh filimkaan door muhiim ah ku leeyahay. Balse midaas wax micno ah ma sameyn doonto madaama ganacsigiisa guud Hindiya oo dhan liito waxaa muuqato Anushka Sharma filimkaan soo saaraha ay ka tahay noqon doono mid ganacsi ahaan guul dareesto.
HMN:- Anushka Sharma iyo Diljit Dosanjh filimkooda Phillauri ayaa si rasmi ah loo soo daabacay todobaadka kowaad lacagaha uu gudaha Hindiya kasoo xareeyay.
Sida shabakada Boxoffice India shaaca ka qaaday filimka Phillauri todobaadkiisa kowaad liito ayuu sameeyay oo ah 20.25 Crore (Trade Figure) wax sare u kac ah ma sameynin filimkaan maal maha shaqada wuxuuna ganacsigiisa ugu badan sameeyay sedexdiisa maalmood ee ugu horeesay.
Waxaa ku adkaan doonto filimka Phillauri 30 Crore inuu gaaro cimri ahaantiisa si uu filim bad baaday (Average) u noqdo madaama hoos u dhaciisa joogto ahaa maal mihii ugu dambeeyay sidoo kalena todobaadkiisa labaad lama filan doono inuu ganacsigiisa noqdo mid saameyn leh.
Fillimka Phillauri ganacsi dhex dhexaad ah ayuu East Punjab ka sameeyay asigoo todobaadkiisa kowaad ka keenay 5 Crore waana gobolka kaliya ee uu ku wanaagsan yahay sababtana waxay tahay in Super Star-ka reer Punjab Diljit Dosanjh filimkaan door muhiim ah ku leeyahay.
Balse midaas wax micno ah ma sameyn doonto madaama ganacsigiisa guud Hindiya oo dhan liito waxaa muuqato Anushka Sharma filimkaan soo saaraha ay ka tahay noqon doono mid ganacsi ahaan guul dareesto.